काठमाडौँ, ४ कात्तिक । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विदेशका अध्ययन र कार्यरत युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) र राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालको संयुक्त पहलमा आजदेखि शुरु भएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले देशको समृद्धि र विकासका लागि युवा वैज्ञानिकले देशमै रहेर योगदान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो..
ललितपुर, ३ कात्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) र राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा सोमबारदेखि तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन हुँदैछ । ‘समृद्धिका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन’ भन्ने मूल नाराको साथ विदेशमा रहेका २० देशबाट कार्यक्रममा युवा वैज्ञानिकले भाग लिने भएका छन् । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लागेका युवाहरुमा भएको ज्ञान, अनुभव,..
काभ्रेपलाञ्चोक, २ कात्तिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान कानूनी शासनभित्र कसैले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटिका पदाधिकारीलाई सपथ दिलाउन आज बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कानूनी शासनभित्र कसैले उन्मुक्ति नपाउने र कानून सबैलाई बाराबरी लाग्ने बताउनुभयो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम जिल्ला इन्चार्जसमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कानून सबैका निम्ति बराबर हो, विधिमा..
काठमाडौँ, ३० असोज विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बेइजिङ समिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समिक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चारकर्मीहरुले लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थलका लागि सबै सञ्चार संस्थाहरुले लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलतासम्बन्धी नीति अबलम्वन गर्नुमा..
काठमाडौँ, ३० असोज ग्राहकहरूको सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफरअन्तर्गतको सेवा आज (२०७६ असोज ३० गते) देखि ९० दिन अर्थात् ३ महिनासम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । यसअघि उपलब्ध समर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित अटम अफर ल्याइएको हो । पहिले उपलब्ध भएका डे डाटा प्याक, डे..
काठमाडौँ, ३० असोज आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को पहिलो ३ महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ हजार ७ सय ९७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका जम्मा उजुरीमध्ये साउन महिनामा ११ र भदौ महिनामा १४ वटा उजुरी फेसबूक म्यासेजबाट दर्ता भएको आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको आधिकारिक फेसबूक पेजमा म्यासेजबाट आएका आधिकारिक उजुरी पत्रलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गर्ने..
काठमाडौँ, २९ असोज । सरकारले देशका युवाहरुमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको प्रयोगसम्बन्धी चाहना जगाउने उद्देश्यले ‘विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन’ को आयोजना गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा पहिलोपटक आयोजित सो सम्मेलन यही कात्तिक ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले..
काठमाडौँ, २६ असोज । एक–दुई हजारका साधारण फोन सेटमा एकपटक फुल चार्ज गरेपछि चार–पाँच दिनसम्म ब्याट्री टिक्छ । तर, लाखौँका स्मार्टफोनका ब्याट्रीले मुस्किलले एक वा दुई दिन धान्दछन् । यसको कारण के त ? स्मार्ट टेक्नोलोजीको विकास यति अघि बढिसक्दा ब्याट्री लाइफमा भने किन सुधार भइरहेको छैन ? फोनको तुलनामा ब्याट्रीको टेक्नोलोजी किन विकसित हुन सकिरहेको छैन ? एरेगन कोल्याबरेटिभ सेन्टर फर..
काठमाडौँ, २६ असोज सौर्यमण्डलको दोश्रो ठूलो ग्रहको रुपमा रहेको शनी ग्रहको बाहिरी चक्रहरु यति विशाल छन् कि पृथ्वीबाट टेलिस्कोपले हेर्दा समेत प्रष्टै देखिन्छन् । तर पृथ्वीबाट शनी ग्रहका उपग्रहहरु भने सजिलोसँग देखिँदैनन् । शनि ग्रहका केही उपग्रहहरुमा जिवनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । ती सम्भावित चन्द्रमाहरु समेत पृथ्वीबाट सहज रुपमा देख्न गाह्रो पर्दछ । हालै वैज्ञानिकहरुले यस्तै सानो आकारका शनी ग्रहका थप २०..
काठमाडौं, २२ असाेज । अब इन्स्टाग्राममा पनि रार्क माेड सिस्टम लागु भएकाे एकाे छ । इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको सहजताका लागी कम्पनीले नयाँ विशेषता थप गरेको हाे। यसअघि अन्य विभिन्न एप्लीकेसनहरूमा यो विशेषता आइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार, यस विषेशताको एन्ड्रोइड तथा आइओएसमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस बाहेक कम्पनीले इन्स्टाग्राममा केही नयाँ विशेषताहरू थप गर्न लागेको छ ।कम्पनीले इन्स्टाग्राम एक्टीभीटी फीडबाट फलोइङ ट्याव समेत हटाइरहेको छ ।..
काठमाडाैं, २१ असाेज । सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा बढी चन्द्रमा भएको ग्रह भएको कुन हो ? भनी प्रश्न सोध्दा वृहस्पति भनिन्थ्यो । झण्डै ३० वर्षसम्म वृहस्पति बढी चन्द्रमा रहेको ग्रह बुझिदै आइएकोमा अब यसो भने गल्ती हुनेछ । वैज्ञानिकहरुले वृहस्पतिभन्दा शनिमा बढी चन्द्रमा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन् । वृहस्पतिसँग ७९ चन्द्रमा रहेकोमा शनिसँग ८२ वटा रहेको पत्ता लागेको छ । सुवारु नामको टेलिस्कोपले..
काठमाडौं, १९ असाेज । पछिल्लाे समय टिकटक युवा पुस्ता माझ निकै लाेकप्रिय बनेकाे छ। टिकटले युवा मत्र हाेइन हरेक उमेर समुहलाई आकर्षित गरेकाे छ । टिकटक लोकप्रिय भएपछि सामाजिक सञ्जालका ठूला कम्पनीहरू चिन्तामा परेका छन् । टिकटकलाई टक्कर दिन फेसबूक र गूगलले याप ल्याउन खोजिरहेका छन् । द वाल स्ट्रटीट जर्नलमा छापिएको खबरअनुसार, गूगलले अमेरिकाको लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ याप फायरवर्क किन्ने कोशिश गरिरहेको छ । फायरवर्क किन्नका..
सान फ्रान्सिस्को, १८ असोज संयुक्तराज्य अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल एक थियो । पेपलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विश्वव्यापी यस क्रिप्टोकरेन्सी क्लबबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो । यस क्लबमा भिसा, उबर, लिफ्ट र मास्टरकार्ड समेतका कम्पनीहरु सदस्य..
काठमाडौँ, १६ असोज नेपाल टेलिकमले फोरजी एलटिइ सेवालाई विस्तार गर्दै ३७ जिल्लामा पुर्याएको छ । काठमाडौँ र पोखरामा २०७३ पुस १७ गतेदेखि सो सेवा शुरु गरेको टेलिकमले बुधबारमात्र विभिन्न ३२ जिल्लाका ५० बढी शहरमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । आज थप पाँच जिल्लाका ६० शहरमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतीभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो । सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा सो..
काठमाडौैँ, १६ असोज टीका, जमरा र आशिर्वाद सहित दशैंमा नयाँ र सुकिला नोट दक्षिणा दिने चलन छ । नयाँ नोट दक्षिणा दिने र लिने मोह अझै घट्न सकेको छैन । तर अब बैंकहरूले यस्तो दक्षिणा मोबाइल बैंकिङमार्फत सीधै बैंक खातामा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेका छन् । बैंकहरूले कागजी नोटको प्रयोग घटाउन र यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्न दक्षिणा मोबाइलबाट बैंक खातामा जाने योजना ल्याएका हुन्..
तनहुँ, १५ असोज तनहुँको सदरमुकाम दमौलीको विभिन्न छ स्थानमा निःशुुल्क वाइफाईको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । व्यास नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने र वल्डलिङ्क कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले सो सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार ती स्थानमा उपकरणसहित पाँच वर्षका लागि वल्डलिङ्कले निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरप्रमुख न्यौपानेले नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गरिने..
विराटनगर, १५ असोज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर नेपाल टेलिकमको पूर्व क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा फोरजीको आज यहाँ शुभारम्भ गर्नुभएको छ । पूर्वनिर्धारित समय बेलुका ५ः२० को समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग सामान्य कुराकानी गर्दै फोरजी सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री राईले नेपाल टेलिकमको तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने फोरजीबाट उपभोक्तालाई राहत मिलेको..
काठमाडौं, १५ असोज । फोरजीे ‘फोर्थ जेनेरेसन वायरलेस’ अर्थात् चौथो पुस्ताको ताररहितको इन्टरनेट डाटा प्रविधि हो, जुन मोबाइल इन्टरनेट प्रविधिमा स्थापित भइसकेको छ । बिहीबारबाट काठमाडौंबाहेकका धेरैजसो मुख्य शहरहरुमा औपचारिक रुपमा फोरजी एलर्टी सेवा सुरुआत हुँदैछ । अहिले टेलिमकले ती शहरीमा परीक्षणका रुपमा फोरजी सेवा एक्टिभ गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार ३२ जिल्लाका मुख्य महानगर र नगरपालिकाहरुमा फोरजी सेवा विस्तार गरिए पनि..
काठमाडौं, १४ असाेज । नेपाल टेलिकमले बुधबारदेखि देशभरका ५० शहरी क्षेत्रमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा संचालनमा ल्याउने भएको छ। कम्पनीले काठमाडौँमा कार्यक्रमको आयोजना गरी फोरजी सेवा विस्तार भएको घोषणा गर्ने र उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। टेलिकमले यसअघि २०७३ पुस १७ गतेदेखि काठमाडौँ र पोखरामा फोर जी सेवा सुरु गरेको थियो। टेलिकमले बढी व्यवसायिक र व्यापारिक कारोबार हुने तथा बढी..
काठमाण्डौं, १३ असाेज । नेपाल टेलिकमले आउँदो बुधबारदेखि देशका २६ वटा सहरमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा अर्थात ‘फोरजी’ सेवा सुरु गर्न लागेको छ । ‘फोरजी’ सेवा चलाउनको लागि मोबाइल सेटसँगै सिमकार्ड पनि ‘फोरजी’लाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइलमा ‘फोरजी’ सेवा चल्छ कि चल्दैन जाँच गर्न र नचल्ने भएमा निःशुल्क परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो सिमकार्ड ‘फोरजी’ सेवा..
काठमाडाैं, १३ असाेज । बुधबारदेखि देशका २६ सहरमा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गर्ने भएकाे छ।देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने परियोजनाअन्तर्गत कम्पनीले पहिलो चरणमा २६ सहरमा सेवा विस्तार गर्न लागेको हो। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले परीक्षणका धेरै काम सफल र्भएकाले पहिलो चरणमा २६ सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए। महानगरसहित सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागिएको टेलिकमले जनाएको..
काठमाडौँ, १२ असोज यस वर्षको दसैंको उपलक्ष्यमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुमा विभिन्न छुट उपलब्ध गराएको छ ।कम्पनीले फोरजी, एलटीई र अन्य सेवाहरुमा विशेष छुटसहितका अफर ल्याएको हो । यी मध्ये रिचार्जमा बोनस बाहेकका अफरहरु आज घटस्थापना अर्थात् असोज १२ देखि नै लागू भएका छन् । अफरअनुसार फोरजी सिम परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । अर्को सूचना नभएसम्म यो अफर निरन्तर रहने..
सुर्खेत, १२ असोज कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नाउँमा नक्कली फेसबुक अकाउन्ट खोलेर चरित्र हत्याको प्रयास भइरहेकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले आज पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नक्कली फेसबुक अकाउन्टको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो । स्वकीय सचिव सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चरित्रहत्या गर्ने..
Results 786: You are at page5of 27